अनुष्काले जन्माईन् छोरी, विराटले लेखे सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टेटस् जस्ले बनायो सबैलाई………. – Khabaarpati
January 11, 2021 January 11, 2021 goodmamLeaveaComment on अनुष्काले जन्माईन् छोरी, विराटले लेखे सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टेटस् जस्ले बनायो सबैलाई……….
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले छोरी जन्माएकी छिन् । उनले आफु जस्तै सुन्दर छोरी जन्माएर श्रीमान विराटलाई बाबु बनाएकी छिन् । छोरी जन्मिएको खुशीयालीमा भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीले सामाजिक सञ्जालमा आफु छोरीको बाबु भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले आज (सोमबार) आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा छोरी जन्मेको सुखद खबर दिएका हुन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
विराटले आफ्ना र श्रीमती अनुष्काको फ्यानहरुलाई आफुहरु छोरीको आमा बुवा बनेको भन्दै दिएको खुशीको यो समाचारले उनीहरुको फ्यानहरुमा खुशीयाली छाएको छ । विरोटको उक्त स्टेटस्मा उनीहरुका धेरै फ्यानहरुले शुभकामना दिनुका साथै कोभिडको महामारी भएको हुनाले बच्ची र आमाको ख्याल राख्न विराट र उनका परिवारलाई सुझाव पनि दिएका छन् । विराटको यो खुशीको कुरालाई उनका फ्यानहरुले धेरै नै शेयर पनि गरेका छन् । विराट र अनुष्काको विवाह तीन वर्षअघि भएको थियो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,